Cumar Cabdirashiid oo ka digay muddo kororsi & xasilooni darro – Banaadir Times
Cumar Cabdirashiid oo ka digay muddo kororsi & xasilooni darro
By banaadir 8th April 2021 77 No comment
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake kana mid ah Xildhibaannada Aqalka Sare ayaa ka hadlay shirkii natiijo la’aanta kusoo dhamaaday ee Afisiyooni iyo waxa ka dhalan kara.
Cumar Cabdirashiid oo qoral soo dhigay Bartiisa ayaa waxaa uu sheegay in sababaha shirka loo fashiliyay ay tahay in la sameeyo muddo kordhin an heshiis lagu aheyn.
“Ujeedada laga leeyahay in la carqaladeeyo wadahadalada su ay u burburaan waa kordhinta waqtiga hay’adaha dowladda, iyada oo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo taageeraya, waxayna kaliya halis ugu jirtaa inay keento xasillooni darro iyo kala qaybsanaan ayu yiri” Cumar Cabdirashiid.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay arrimahaan oo kale lagula xisaabtamo hoggamiyeyaasha ka hor inta aysan xaaladdu sii xumaan.
Warkaan kasoo baxay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli shalay uu asfjil ku dhamaaday shirkii Afisiyooni, isla markaana ay isku eedeeyeen Villa Soomaaliya & Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Maamulka Hir-Shabeelle oo Eedeyn kulul u jeediyay Dowladda Soomaaliya
By banaadir 13th May 2021
Xildhibaan Idiris Dhaqtar” Farmaajo waa lagaa raayaye is casil”